ရာသီလာခြင်းကြွက်တက်ခြင်းအတွက်လျှော်ရေနံ၏မယုံနိုင်လောက်ဖွယ်ကောင်းကျိုးများ - HelpMEHemp
မိန်းမတိုင်း အတွေ့အကြုံများaခံစားချက် ကွော လ၏အချိန်ရောက်သောအခါ၊။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသင် hအစီအစဉ်များကိုဖျက်သိမ်းရန်နှင့်ရိုးရိုးတစ်နေ့လုံးအိပ်ရာခင်းဖို့ရန် Ave ။ ဒီလိုလျှင် မြင်ကွင်းတစ်ခုအကျွမ်းတဝင်အသံ, သင်ယူမှု ရာသီလာခြင်းအဘို့အလျှော်ရေနံ၏အားသာချက်များ နိုင် သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်။
ကျော် 84.1 ရာခိုင်နှုန်းကို အမျိုးသမီးများ ခံစား မှ ခဲခက်သော ရာသီနာကျင်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ ဒါကို dysmenorrhea လို့လည်းခေါ်တယ် ခံစားချက်အင်္ဂါရပ်များ ဝမ်းဗိုက်တစ် throbbing နာကျင်မှု။ တစ်ယောက်ယောက်ရှိရင် ကြုံတွေ့နေရ ဒီလက္ခဏာတွေ၊ သူတို့က ခဏခဏ အတင်းအကြပ် ပြောရန် အလုပ်လုပ်ရန်နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ညအိပ်ညောင်းခြင်းနှင့်ပင် ခရီးသွားအစီအစဉ်များ။
လျှော်ရေနံ၏လူကြိုက်များမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ ယခုကုသရန်အသုံးပြုသည် ကျန်းမာရေးပြissuesနာများကျယ်ပြန့်, ကင်ဆာ၊ အရေပြားပြproblemsနာများ၊ ရာသီလာခြင်း။ ၎င်းအတွက်အသုံးပြုသည့်အစီရင်ခံစာများပင်ရှိခဲ့သည် ကာလ လိင်. နေ့တိုင်းလျှော်ရေနံအသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနေပုံရသည်။
ဘာ Is Hemp Oil?
လျှော်သည်ယနေ့မျိုးဆက်၏အထင်လွဲမှားဆုံးအပင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်နှင့်မတူဘဲ, အရာပါရှိသည် tetrahydrocannabinol (THC), သောသင်တို့ကိုပေးသည်aစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှု (သို့မဟုတ် "မြင့်မားခြင်း" ၏ခံစားချက်)၊လျှော်၎င်း၏များအတွက်ရပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နှင့်ကျန်းမာရေးအားသာချက်များ။ တရားဝင်ရောင်းချလို့ပါ များစွာသောပြည်နယ်နှင့်နိုင်ငံများတွင်သငျသညျ နိုင် ထောင်ထဲမှာစိတ်ပူစရာမလိုဘဲ၎င်း၏အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများကိုခံစားပါ သို့မဟုတ်ထို munchies ရတဲ့.
ကြွယ်ဝသောလျှော်၏သမိုင်းကိုပြန်ခြေရာခံနိုင် ဘို့ ရာစုနှစ်များစွာ၏စုံတွဲတစ်တွဲ။ တစ်ချိန်ကaအလယ်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်း ထည်, စက္ကူ, နှင့်ကြိုး။ လျှော်သဲလွန်စတွေကိုတောင်မှရှာတွေ့ခဲ့သည် ရှေးခေတ် ဆေးဝါးအတွက်အသုံးပြုသည်ဟုယုံကြည်ရသောတရုတ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အိန္ဒိယ။
Hemp Oil သည်လျှော်ရုံအမျိုးအစားများစွာအနက်မှတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းပါတယ် အကျိုးial လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အာဟာရ။ ဤအချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လျှင်၎င်းသည်အမျိုးစုံသောသဘာဝဆေးကုထုံးအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ လျှော်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ပါရှိသည် cကဗျာl (CBDTHC ကိုသာသဲလွန်စပမာဏနှင့်အတူ) ။
လျှော်အမျိုးအနွယ်ကိုရေနံ, or လျှော်ရေနံ, အုန်းဆီနှင့်သံလွင်ဆီမည်သို့ထုတ်ယူသည်နှင့်တူသည့်လျှော်ပင်၏အစေ့ကိုအအေးပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒါဟာအတွက်ကျည်အောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းမှတဆင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်စျေးကွက်, ဆပ်ပြာ၊ ချက်ပြုတ်တဲ့ဆီ၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့်အလှကုန်များပါ ၀ င်သည်။
လျှော်ရေနံ အဆိုပါဖုံးလွှမ်း ရောင်စဉ်အပြည့် ဆီ ဆေးခြောက်မှဆင်းသက်လာ sativa စက်ရုံ။ သို့သော်၎င်းသည်မတူညီပါ CBD ရေနံ, အပင်၏ရိုးတံ, ပန်းပွင့်နှင့်အရွက်သုံးပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်၏အကျိုးကျေးဇူးများမှဝင်းနိုင်ထွန်း oရာသီစကြွက်တက်ခြင်းအတွက် il လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် မင်္ဂလာပါ။ ဒီဂုဏ်သတင်းက၎င်း၏ကြောင့်ဖြစ်သည် ဓာတ်သတ္တုများ၊ ဗီတာမင်များနှင့် antioxidants ပမာဏများစွာရှိသည်။ ဒါဟာအစဝါကြွားတတ် ၏ရွှေအချိုးအစား Omega-3 နှင့် Omega-6 amino acids, ငါတို့အစားအစာအတွက်လောင်ရမယ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများဖြစ်ကြသည်.
သင်တို့ရှေ့မှ t ကိုစဉ်းစားပါသူသည်ရာသီသွေးကြောကျဉ်းခြင်းအတွက်လျှော်ရေနံ၏အားသာချက်များ၊ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒီအခြေအနေ အသေးစိတ်.
ခန္ဓာကိုယ်အခါ အဆင်ပြေအောင် အဲဒီလရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအီစရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးစေတယ်။ ဒါ အကျိုး endometrial တစ်ရှူးတည်ဆောက်ရန်သားအိမ်အချက်ပြ။ ရလဒ်ကတော့ဒါပဲ ပရိုဂျက်တာရိုရွန်သည်သွေးကြောများနှင့်သွေးများဖြင့်ပြည့်လျှံကာ၎င်းကိုကြိုဆိုသည် အ ဓာတ်မြေသြဇာ။ ဘယ်အချိန်မှာကြက်ဥ နေဆဲကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိပရိုဂျက်စတုန်းပမာဏကျဆင်းသွားသည်။
ထိုအခါခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများနှင့်ဖြတ်တောက်မှုကျုံ့f အဘယ်အရာကိုပြန်ယူရန်ကြိုးစားသွေးစီးဆင်း လုပ်နိုင် သွေးထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘဲ, endometrial တစ်သျှူးသွန်းလောင်းရန်အဆင်သင့်ရရှိသွားတဲ့။ ဒါ လှမ်း နာကျင်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးအရိပ်လက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပရိုဂျက်စတုန်မပါ ၀ င်ပါက endometrium တွင်ကာကွယ်မှုမရှိပါ။ ပရိုဂျက်စတုန်းကျဆင်းနေသည့်နည်းတူနောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ဓာတုတိုးပွားလာသည် - prostaglandins ။ Tသူ၏ ဓါတုဗေဒ အဘို့အလမ်းစေသည် an ရောင်ရမ်းခြင်းတုန့်ပြန်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ သားအိမ်ကျဉ်းခြင်း၊ သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောသွေးထွက်ခြင်း။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေသည့်အမျိုးသမီးများသည်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့အိပ်ရာဝင်စဉ်ဆက်တိုက်လှိမ့် ၀ ယ်ခြင်း၊ နာကျင်မှုသက်သာစေရန်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးသုံးခြင်း၊ Ladiesdysmenorrhea ခံစားနေရသောသူတို့သည်ညသန်းခေါင်ယံ၌ပင်အိပ်ရာမှထကြသည် နှင့် ခံစားချက် of ပုံမှန်မဟုတ်သောမိုးသည်းထန်စွာစီးဆင်းမှုကြောင့်မူးဝြေခင်း။
ရာသီလာခြင်း၏နာကျင်မှုသည်များသောအားဖြင့်နောက်ကျောနှင့်ဝမ်းဗိုက်တွင်အဓိကကျသည်, စတင် အမျိုးသမီးတစ် ဦး မတိုင်မီတစ် ဦး မှနှစ်ရက်ပတ်ပတ်လည်။ ဒီအချိန်အပိုင်းအခြားက ကြက်ဥဟာသားဥအိမ်ကနေထွက်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့သံသရာအဆုံးအထိရောက်သွားလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်အဆင်မပြေ အဲဒီမှာမပြီးသေးဘူး။ S ကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း ခံစားရသည် တစ်လတာကာလအတွင်းအန်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းဖြစ်ခြင်း။ Thအကျိုးသက်ရောက်မှုများ မှိုင်းကနေပြင်းထန်အထိအထိနိုင်ပါတယ်။ ဤလက္ခဏာများအပြင်အမျိုးသမီးများလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည် ရှိ မြင့်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှု။
ရာသီလာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကြွက်တက်ခြင်းများကိုသက်သာစေရန်အထောက်အကူပြုသည့်အလွန်များပြားသောပါးစပ်ဖြင့်ထုတ်ကုန်များရှိပါသည်။ သို့သော် ဒီထုတ်ကုန် feature ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး, အိပ်ငိုက်ခြင်း, အစာအိမ်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့် တိုးမြှင့် luလျှို့ဝှက်ချက်များကို ng ။ အချို့ကိစ္စများတွင်ဤထုတ်ကုန်များဤအသုံးပြုမှု အခြားအရာတို့တွင်မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်စူးရှသောအသည်းပျက်ကွက်မှုတို့ကိုပင် ဦး တည်နိုင်သည်လေးနက်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး။
လျှော်ရေနံ ရာသီလာခြင်း - ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲt အလုပ်လုပ်ပါသလား
လျှော်ရေနံ ယနေ့ကျန်းမာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထင်ရှားတဲ့နေရာထွင်းထုခဲ့သည်။ ဒါကအမှားမဟုတ်ပါဘူး။ များပြားလှ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ဒီအံ့ product စရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ကကမ္ဘာကြီးကိုလူသားတွေအတွက်ကျန်းမာစေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
လူများစွာသည်ကုသရန်လျှော်ရေနံကိုအသုံးပြုကြသည် တစ် ဦး အိမ်ရှင် အခွအေန။ တစ်ဦးကnd သုံးပြီး ရာသီလာခြင်းအဘို့အလျှော်ရေနံ နိုင် ပေး အံ့သြစရာ အကျိုးခံစားခွင့် ရာသီလာခြင်းကြွက်တက်ခြင်းမှခံစားနေရသောမည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမဆို
ဘယ်လိုလဲ မ လျှော် အဘို့အဆီ ရာသီလာခြင်း ကူညီပါ?
ထက်နည်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း, လျှော်ရေနံ ဘယ်နေရာမှာမှသွားပြီ နေရာတိုင်း။ လျှော်ရေနံယခုတွင်တည်ရှိ၏ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ ကုန်စုံဆိုင်များနှင့်ဆေးဆိုင်များ အတန်းမှာ. နှင့် t ကိုသူ၏ရေနံသိသိသာသာနိုင်ပါတယ် ရာသီလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအဆင်မပြေမှုကိုသက်သာစေသည်ramps ။
လျှော်ရေနံသည်ထိခိုက်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် endocannabinoid စနစ်က (လိမ်လည်မှုများ)ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များအားလုံးကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ homeostasis ကိုထိန်းသိမ်းသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် cannabinoids များရှိနေသော်လည်းအပင်မှဆင်းသက်လာသည့် cannabinoids သည် ECS ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုများစွာမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ လျှော်နှင့်လျှော်ရေနံ ECS ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် cannabinoids အများအပြားပါ ၀ င်သည်။ THC နေစဉ် တိုက်ရိုက်ချည်နှောင် ECS receptors ကို CBD ကလှုံ့ဆော်ပေးတယ် နောက်ထပ် သွယ်ဝိုက်။
လျှော် နှင့်ဆက်စပ်ကြွက်တက်ပိတ်ဆို့ကြောင်းနာကျင်မှု - ဖိနှိပ်ဒြပ်စင်ပါရှိသည် ရာသီစက်ဝန်း. It သည်အစာခြေလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုပင်လျော့နည်းစေသည်။ ဒီမှတဆင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖောင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ Hemp ရေနံလုပ်နိုင်သည် လည်း သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့် နှင့် oxyg ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်သည်jw.org my လိုအပ်သောတစ်ရှူးများသို့သွားသည်။ ဒါ အကျိုး ကြွက်တက်ခြင်း၏ကာကွယ်ခြင်းကိုကူညီပေးသည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကျုံ့ခြင်းကများသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏ကာလအတွင်းကြွက်တက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤရွေ့ကားကျုံ့ပေါ်ပေါက်ပါတယ်အဆိုပါသားအိမ်နံရံသွန်းလောင်းရန်ကြိုးပမ်းမှု၌တည်၏။ ဒါ အာရုံခံစားစေသောသတင်း endometriosis ခံစားရသောအမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုနာကျင်သည်။ လျှော်ရေနံတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဆေးခြောက်သောက်သုံးသူများသည်ကြွက်သားများကိုချောမွေ့စေရန်နှင့်အနားယူရန်ကူညီပေးသည် တိုးမြှင့်လာသည် သွေးစီးဆင်းမှု။ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းရှိကြွက်သားများလျှော့ချရန်ကိုလည်းအားပေးသည်။
Hemp Oil သည်ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ဒါ နည်းလမ်း ခွင့်ပြုမယ် အသုံးပြုသူများသည် သို့ အတှေ့အကွုံ လျှော်ဆီ၏ကြွက်သား - လျှော့ပေါ့ဂုဏ်သတ္တိများ။
နည်းလမ်းများလျှော်ရေနံ အလုပ်များ ရာသီစကြွက်ခြင်းအဘို့အ
ခန္ဓာကိုယ်သည်ဆဲလ်အားလုံး၏အခြေအနေကိုထိန်းညှိရန်ကြိုးစားသည်။ Hemp ရေနံကဒီအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးသည် တိုးမြှင့် အ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ဦး နှောက်၊ အူနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိအာရုံကြောများနှင့်တစ်သျှူးအတွင်းပိုင်းအတွင်းရှိဆေးခြောက်။ ဒါ အကျိုး homeostasis ကိုထိန်းညှိပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုတိုးတက်စေသည်။
UC မှဆင်းသက်လာထုတ်ကုန်သီခငျြးဆိုပါannabis ့premenstrual syndrome ရောဂါကုသရန် ativa စက်ရုံ (PMS) နောက်ကျောမှစတငျ 16th ရာစု။ ဒီသဘာဝဆေးတစ်လက် ဘို့ mensural ကြွက်တက်ကူညီလိမ့်မယ် in မြဝတီing မင်းရဲ့ PMS လက္ခဏာတွေ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် မင်းရဲ့အချိန်ကာလမှာတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားပါစေ။
ဒီမှာရှိပါတယ် အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ ရာသီလာခြင်းအဘို့အလျှော်ရေနံ။
လျှော်ရေနံ၏စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများ အကူအညီ ကာလ -related စိတ်ဓါတ်များအပွောငျးအလဲ။ ဒီဂိမ်း - changer အလုပ်လုပ်တယ် ကောင်းစွာ နေသောအမျိုးသမီးများအတွက် ဥခွံ ပြီးတော့သူတို့ခံစားနေရတဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလွှတ်ပေးချင်ကြတယ်။ Hemp ရေနံသည်အမျိုးသမီးများအားစိုးရိမ်ပူပန်စေသောအတွေးများကိုတောင်ကူညီပေးပြီးညဘက်တွင်ကောင်းမွန်စွာအိပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Hemp ရေနံအမျိုးသမီးတွေသာယာတဲ့ခံစားရစေသည် နှင့်ပင်ခေါင်းကိုက်သက်သာ။ စိတ်အပြောင်းအလဲများလျော့နည်းခြင်းကသူတို့ကိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏သံသရာမတိုင်မီနှင့်စဉ်အတွင်းစိတ်တိုလွယ်သည့်အမျိုးသမီးများအားလည်းကူညီနိုင်သည်။ လျှော်ရေနံ၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုသက်သာစေသည် သူတို့ရဲ့ကာလအပေါ်နေစဉ်.
အမျိုးသမီးများစွာ သူတို့ရဲ့ရှိခြင်းအခါရောင်ရမ်းခံရ ကာလ။ ဒါ အကျိုး sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏များစွာသောဒေသများရှိ, အနိမ့်ကျော၊ အစာအိမ်နှင့်ရင်သားများအပါအ ၀ င်။ Premenstrual ရောင်ရမ်းခြင်းတစ်ခုမသက်မသာခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်,အရာပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဘို့ အမျိုးသမီးများစွာ
ဤ မသက်မသာခံစားမှု ကြောင့်ဖြစ်ပျက် ထခြင်းနှင့်ကျလိမ့်မည် ဟော်မုန်း။ အီစထရိုဂျင်သည်ရင်သားပြွန်များကိုချဲ့ထွင်ပြီး၊နို့ဂလင်းရောင်။ Hemp ရေနံ ကူညီပါsခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိန်းညှိ vanilloid အလယ်အလတ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အဲဒီ receptor ၏အမြင် နာကျင်မှု။
လျှော်ရေနံအနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်းသည်သင်၏အစာခြေလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေသည်။ ဘေးဖယ် declas ကနေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောင်ရမ်း ing, ဒီရောဂါပျောက်ကင်း ထို့အပြင်ပျို့ဖယ်ရှားပစ်ရရှိသွားတဲ့။ ကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်ဖောင်းပွမှုနည်းခြင်းနှင့်ကျဉ်းကျပ်ခြင်းများကြုံတွေ့နိုင်သည်။
ဒါဟာ tuကြောင်း rns ထွက် လျှော်ရေနံများအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ် ခြုံငုံ အမျိုးသမီးများ၏ကျန်းမာရေး လတ်တလော research တွေ့ရှိခဲ့ cannabinoids လျှော်ရေနံ may ၌တွေ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဆဲလ်များစတင်ပျံ့နှံ့ခြင်းကိုတားဆီးပါ။ ဤအန္တရာယ်ရှိသောရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ခြင်းသည်အသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးများအတွက် ဦး စားပေးသင့်သည်။ မှတဆင့် ၏အသုံးပြုမှု လျှော်ရေနံ, ကင်ဆာ ဆဲလ်တွေ နိုင် မပျံ့နှံ့စေဘူး,နှင့် နောက်ဆုံးတွင်အမျိုးသမီးများသည်တိုးတက်မှုမှလွတ်မြောက်နိုင်သည် ဒီရောဂါ၏နောက်ဆုံးအဆင့်သို့, အရာ နိုင် သေခြင်းသို့ပို့ဆောင်သည်
Hemp အဆီများများသောအားဖြင့်တစ် ဦး ကျဆင်းသွားအဖုံးနှင့်အတူပါလာသည်။ သင်သည်သင်၏လျှာပေါ်တွင်တစ်စက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့နောက်မျိုခြင်းမပြုမီတစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ ဤသည် Multi- ရည်ရွယ်ချက်ရေနံလည်းဖြစ်နိုင်သည် ယူ နှုတ်ဖြင့်, ဖြည့်စွက်ရန်အလားတူ။ အကယ်၍ သင်ကနှုတ်ဖြင့်သောက်လိုလျှင်၊ သေးငယ်သောဆေးပမာဏဖြင့်စတင်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်သင်၏အစာအိမ်သည်အထိခိုက်မခံလျှင်၊
Hemp ရေနံဘူး လည်း ဒေသအလိုက်အသုံးပြုရနှင့်အခြားအဆီများနှင့်အတူရောနိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် you သည်သင်၏အရေပြားကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပစ်မှတ်ထား ရောင်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့ဒေသများ။ အဲဒါကိုပွတ်သပ်ပြီးလျှောက်လွှာကိုပြန်လုပ်ပါ လိုအပ်အဖြစ်. သုံးခြင်းဖြင့်ရှူရှိုက်မိခြင်းအားဖြင့်လျှော်ရေနံမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ပင်ရနိုင်သည် ရေငွေ့။
Hemp Oil သည်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သင်နှင့်အတူချက်ပြုတ်နိုင်သည် it သို့မဟုတ်တစ်အောင် သုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား ကထဲက။ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုသင်မပြီးမြောက်ပါကကျန်အသုံးပြုမှုကိုနောင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်ထားပါ။ မင်းလုပ်ရင်သုပ်တွေကိုမကြိုက်ဘူး၊ သင့်အပေါ်လျှော်ရေနံ နံနက်စာ, နေ့လည်စာ, ဒါမှမဟုတ်ညစာ။ သငျသညျအပြည့်အဝအစာအိမ်အပေါ်ကစားသောအခါ, အကျိုးသက်ရောက်မှုယူဖို့ကနာရီအနည်းငယ်ပေးပါ။
လစဉ် visit ည့်သည်၊ အချိန်ကာလ၊ ရာသီလာခြင်း၊ အဒေါ်စီးဆင်းခြင်း - သင်ခေါ်ဆိုသည်ဖြစ်စေ၎င်းကိုရှောင်ရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။ လက္ခဏာများနေစဉ် နာကျင်မှုလုပ်နိုင်တဲ့၏ပြင်းထန်မှု အမျိုးသမီးများအတွက်ကွဲပြားသည် ရာသီလာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလူတိုင်းလိုချင်ကြသည်s ပျောက်ကွယ်သွားရန်ဤအဆင်မပြေ။
အသုံးပြုခြင်း hemp ရေနံ ရာသီလာခြင်း သင်၏စိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲပြtheနာများကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါ အရည်အသွေး အထူးသဖြင့်ဆေးခြောက်ကိုမသုံးလိုသော်လည်းအတွေ့အကြုံရလိုသူများအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည် အ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ဆေးခြောက်စက်ရုံကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
မကြာခင်မှာပဲသင်ဟာ Midol ကိုညတွေဆီမရောက်နိုင်တော့ဘူး သော မင်းဟာမခံမရပ်နိုင်တဲ့ရာသီလာခြင်း၊ သင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်လွန်ခဲ့သောလွန်ခဲ့သောငရဲရက်သတ္တပတ်သည်နောက်ဆုံးတွင် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိလာလိမ့်မည်။
အသုံးပြုခြင်း လျှော်ရေနံ ရာသီလာခြင်း, သင်သည်အားကစားခန်းမထဲမှာချွေး session တစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်, သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်သွားနှင့်အလုပ်မှာကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါ။
ရာသီလာခြင်းအဘို့အသင်သည်လျှော်ရေနံကိုအသုံးပြုဖူးသလော အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်လိုပါသည်။
နှင့် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ မယုံနိုင်စရာပါပဲ လျှော်ရေနံထုတ်ကုန် Help Me Hemp မှာ။